Moments Neshamwari 28
Copyright, 1910, neHW PERCIVAL.
Tiri isu here kana kuti hatisi kubatana neatma-buddhi?
Isu hatisi. Mubvunzo uyu ndewemazhinji uye wakajeka, uye zvinotora moyo kuti isu tinoziva zvese zvinhu pazviri zvakavakirwa. Zvinhu zvacho ndizvo atma uye buddhi iyo "isu" tiri kana "tisina kubatana". Mubvunzo mubvunzo unowanzobvunzwa kubva pane izvo zvouchenjeri. Atma inonzi ndiyo mweya wepasirese unocherekedza zvinhu zvese. Buddhi anonzi ndiwo mweya wemweya, mota yaatma, uye neya kuburikidza neya atma inoshanda. "Isu" anonzi anofunga ega. “Mubatanidzwa” inzvimbo umo mumwe kana vanopfuura vakabatanidzwa kana kubatanidzwa pamwechete. Atma iyo yakasikwa yakasarudzika mweya uye buddhi mota yayo, iri mukubatana nguva dzose; nekuti ivo vanoita zvakabatana nguva dzese uye buddi anoziva atma uye vaviri vacho vakabatana. Vanogona saka kutaurwa kuti vakabatana Iwo anoziva zvakasarudzika kuziva. Kune mumwechete wedu wekubatana naatma-buddhi, ini ndinofanira kuve nekuziva seni uye ndinofanira kuziva kuti ndiani akaita seni; inofanira kuziva nezve yayo humwe uye kuzivikanwa uye zvakare inofanira kuziva yeidi uye yeAtma, uye inofanira kuziva kuti somunhu wakabatanidzwa, yakabatana, iyo yepasirose buddhi uye atma. Kana munhu wandinenge ndichiziva nezvekwaari uye ndichiziva kuti panguva imwechete neyevanhu vese vanoziva atma uye buddhi ipapo munhu iyeye anogona kutaura chokwadi kuti "mukubatana naatma uye buddhi." Ipapo panenge pasinga fungidzirwe neizvozvo Mumwe nemumwe kuti chii chinonzi atma uye buddhi uye isu tiri, uye mubatanidzwa chii, nekuti munhu iyeye aizoziva uye kuziva kwaizogumisa kufungidzira. Mumamiriro ezvinhu aripo emunhu, "isu" hatizive zvatiri. Kana isu tisingazive kuti "isu" ndivanaani, hatizive kuti ndiani kana chii buddhi uye atma ndivanani; uye kana tisingazive zvatiri uye tisina kusarudzika kuziva, hatisi sevanhu vanozviziva isu takabatana nemisimboti yakasarudzika yeatma uye buddhi. Kubatana kuri padyo, uye pane iyo ndege inoziva kusangana nechinhu chakabatana. Munhu anozviona haakwanise kutaura chokwadi kuti akabatana kana mubatanidzwa nechinhu chero chipi zvacho chaasina kunyatsoziva, kunyangwe icho chimwe chinhu chingavapo naye. Atma na buddhi varipo nemurume nguva dzese asi murume kunyangwe achingozviziva ari munhu haazive kana kuziva atma uye buddhi senzvimbo dzese uye dzekunamata. Nekuti haazivikanwe kuziva uye nekuti haatomboziva kuziva kwake, saka, iye, murume, sekufunga kunge asiri mubatanidzwa naatma-buddhi.
Hazvisizvo here kuti zvose zvatinokwanisa kuva zviripo matiri uye kuti zvese zvatinofanira kuita ndezvokuti tive nekuzviziva?
Kazhinji kutaura, icho ichokwadi, uye, zvese izvo pakutanga zvatinofanira kuita ndezvekuti tizive zvese zvirimo matiri. Izvi zvakakwanira zviripo. Zvino, pamwe, isu tichafanirwa kuziva zvese zviri kunze kwedu tobva taona mutsauko pakati peizvozvo nezvose zvirimo matiri.
Mubvunzo sezita rinonyaradza uye kupusa semhepo inovhuvhuta muzhizha-uye sekusingaperi. Kana munhu achizozvigutsa nemubvunzo wakadai uye mhinduro yekuti "hongu" kana mhinduro isingaperi semubvunzo, pachave nekubatsirwa kushoma kunowanikwa kungangozouya kune wezvehupfumi anozvigutsa nemufungo wekuti akachengeta kumwe kunhu kwake. bura mhodzi dzese dzezvinhu zvese zvinokura. Mumwe anoziva kana anotenda kuti ane mune yake make up zvese izvo zvinoita kuti ave kana kuziva nezvazvo, uye iye asingaiti chimwe chinhu chaanoziva, akaipa zvakanyanya uye anonzwirwa tsitsi kupfuura iye asingatendeke nemafungiro anofungidzirwa asi iye anoedza chete kuvandudza mamiriro ake ezvinhu epanyama. Munyika dzekuMabvazuva zvakajairika kunzwa vanodzokorora vachidzokorora mumitauro yavo: "Ini ndiri Mwari"! “Ndiri Mwari”! “Ndiri Mwari”! ine nyore uye yakanyanya kusimbisa chivimbo. Asi ndizvo here? Kazhinji ava vanozova vanamwari vapemhi mumigwagwa uye ivo vanoziva zvishoma kupfuura kukwana kutaura. kana ivo vanogona kunge vakadzidza chaizvo uye vachikwanisa kupinda mune refu nharo mukutsigira zvavanotaura. Asi vashoma veavo vanoreva vanopa humbowo muhupenyu hwavo uye nebasa ravanonzwisisa uye vane kodzero nazvo. Isu takatumira kunze kwenyika zvisungo izvi pamwe nemhando dzakasiyana dzevakazvipira ava uye vachiri kutambira zvinhu zvitsva kuUnited States. Asi kana vari vamwari, ndiani anoda kuva mwari?
Zvakanaka kuti munhu atende kuti zvinhu zvese zvinogoneka kwaari; asi unyengeri maari kuyedza kuzviita kuti atende kuti anga atosvika kune icho chinogona kuitika kure. Chemist iri murabhoritari yake, anorwadziwa ari pasuru yake, muvezi pamarble, kana murimi muminda yake, vamwari-vakaita senge avo vanofamba-famba vachipenga uye vachisimbisa kuti ivo ndimwari, nekuti huMwari hwuri mukati ivo. Zvinonzi: "Ini ndiri mweya wecrocosm." Ichokwadi uye yakanaka. Asi zviri nani kuita pane kuti utaure.
Kuziva kana kutenda chinhu inhanho yekutanga kuti isvike pazviri. Asi kutenda chinhu hakuzi kana kuve icho chinhu chakadavirwa. Kana tikatenda kuti zvese zvatinogona kuva zviri mukati medu, isu tinongove nekuziva kwekutenda kwedu. Ikoko hakuzi kuziva zvinhu zviri matiri. Tinobva tave kuziva nezvezvinhu zvatinotenda nezvazvo nekuedza kuzvinzwisisa uye nekushanda kwavari. Kutungamirirwa nechinangwa chedu uye zvinoenderana nebasa redu tinozoziva zviri mukati medu uye tosvika pakuwanikwa kwezvinangwa zvedu. Nebasa rake iyo kemesi inounza mune izvo zvaari kushandira maererano nemafomasi. Anorwadzisa anozivisa zvirinani mundangariro dzake. Muvezi anoita kuti chifananidzo chisave kubva pamarble. Murimi anokonzeresa kukura izvo zvinhu izvo zvaigona kungova mumbeu. Kuti munhu ane zvinhu zvese mukati make ipfungwa dzoumwari. Mufungo uyu ndiyo mhodzi yeuMwari. Uku kufunga kweumwari kuri kushungurudzwa, kusekwa uye kusekwa kana kuchinge kwakasungirirwa zvinyore. Kana ichinge ichipepereswa zvisingaite nemiromo isingafungi, senge mhodzi yakapururwa pamusoro pevhu rakaomeswa, haizodzika midzi. Mumwe anoziva kukosha uye anoshuva kudyara mhodzi haachaidze pachena, asi anoisa muvhu rakakodzera uye achasimudza nekuchengeta izvo zvinokura kunze kwembeu. Mumwe anogara achitaura kuti ndewamwari, kuti ndiye miccosm yemacrocosm, kuti iye ndiye Mithra, Brahm, kana mumwe munhu wekwaMwari, ari kufumura nekupusha mbeu iyo yaanayo uye angangodaro asiri iye mbeu yeuMwari ichadzika midzi uye ichakura. Iye uyo anonzwa kuti iye akagadzika Areka yaNoa uye anonzwa huMwari mukati, akabata hutsvene uye anobatsira pfungwa. Nekukudziridza nekuvandudza mifungo yake uye nekuita zvinoenderana nekutenda kwake, iye anopa mamiriro ezvinhu mukati uye kubudikidza neizvozvo ungwaru neuMwari zvinokura zvakasikwa. Ipapo anozoziva zvishoma nezvishoma kuti zvinhu zvese zviri maari uye kuti zvishoma nezvishoma ave kuziva zvinhu zvese.